युवा पुस्ताको ध्यान कतातिर छ ? देशको दुःखभन्दा हाँसोमा दंग – समावेशी
युवा पुस्ताको ध्यान कतातिर छ ? देशको दुःखभन्दा हाँसोमा दंग
शनिबार, पौष २८, २०७५ | ८:३७:२२ |
हाम्रो पुस्ताका युवाको ध्यान कतातिर छ ? यो जान्न यही एउटा तथ्यांक काफी हुनेछ । नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक बुधबार राति ९ बजे ‘जनतासग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्छ । मनोज पाण्डेद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रमको २३ औं श्रृंखला युट्युबमा २७ हजार ९ सय ८० जनाले हेरेका छन् । योभन्दा अघिल्लो अर्थात् २२ औं एपिसोडचाहि“ ३५ हजार ३ सय ६२ ले हेरेको देखिन्छ । यस्तै २१ औं श्रृंखला ४० हजार ६ सय १३ जनाले हेरेका थिए । कार्यक्रमको पहिलो श्रृंखला भने ७५ हजार ४ सय ३५ जनाले हेरेका छन् । यो सबैभन्दा धेरैले युट्युबमा हेरेको श्रृंखला हो । दोस्रो श्रृंखला भने, ५३ हजार २ सय ५९ जनाले हेरेको हिसाव देखिन्छ ।
आशा, उत्साह जगाउने र देशको अवस्थाबारे आधिकारिक सूचना पाइने यस्ता कार्यक्रमभन्दा अहिलेको पुस्ताको ध्यान भने मनोरञ्जनात्मक श्रृंखलाले बढी तानेको छ ।
उदाहरण हो नेपाल टेलिभिजनबाटै दुई महिनादेखि प्रसारण हुदै आएको मुन्द्रेको कमेडी क्लब । भारतीय चर्चित कमेडियन कपिल शर्माको शोबाटै प्रभावित भएर उही शैली र उस्तै ढाचामा प्रसारण भइरहेको यो शृंखलाको यो हप्ताको कार्यक्रम युट्युबमा हेर्नेको संख्या समाचार तयार पार्दासम्म ११ लाख ९ हजार ८ सय ८६ जना पुगेको छ । जहाँ ३ हजार ५७ ले कमेन्ट गरेका छन् । अघिल्लो साताको सोही कार्यक्रम युट्युबमा ८ लाख ८५ हजार १२७ जनाले हेर्दै २ हजार ८ सय ५० जनाले टिप्पणी गर्न भ्याएका थिए ।
सातौं श्रृंखला १० लाख ४९ हजार ६ सय ८३ जनाले हेरेको भेटिन्छ । उक्त श्रृंखलामा कार्यक्रम सञ्चालक जितु नेपालले धुर्मुस–सुन्तलीलाई अतिथिको रूपमा निम्त्याएका थिए । त्यो श्रृंखलामाथि २९ सय १९ जनाले टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् । यस्तै, नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हु“दै आएको हाँस्य श्रृंखला मेरी बास्सै यो अंक १० लाख ९२ हजार १ सय ३९ जनाले हेरेका छन् । अर्काे हास्य श्रृंखला भद्रगोल ११ लाख ७८ हजार ६ सय ३६ जनाले हेर्न भ्याएका छन् । त्यस्तै हाँस्य श्रृंखला जिरेखुर्सानी युट्युबमा हेर्नेको संख्या २ लाख ५० हजार ९ सय ७५ पुगेको छ ।
युट्युबमा प्रायः अश्लील शीर्षक राखेका भिडियो हेर्ने युवा पुस्ताको भीड भने अचम्मको छ । ज्ञानगुनका कुरा खोज्नेभन्दा पनि यौनसग जोडिएका मसला चासोसाथ हेर्नेको संख्या अत्यासलाग्दो छ । यस्तैमध्ये एक हो पूmल्चोकी मिडिया । त्यसमा एउटै छाडा शीर्षकको भिडियो ‘केटा नपाएपछि भ्यान्टाले काम चलाएलाई २३ लाखले हेरेका छन् ।